बैंकले ऋण दिन नपत्याएका चन्द्र ढकाल अन्ततः बने देशकै सबैभन्दा ठूलो बैंकको अध्यक्ष – Info Bazar
बैंकले ऋण दिन नपत्याएका चन्द्र ढकाल अन्ततः बने देशकै सबैभन्दा ठूलो बैंकको अध्यक्ष
पोखरा-बिहान साढे आठ बजे पानी पोखरीस्थित आइएमई कम्प्लेक्समा पुगेपछि उनले घडी हेरे र भने, ‘सरी है, मैले तपाईँहरुलाई धेरै समय त कुराइन ?’ तर त्यतिबेला साढे आठ बज्न दुई मिनेट बाँकी नै थियो । उनले नै हामीलाई बिहान साढे आठ बजेको समय दिएका थिए । हामी त्यसको दुई मिनेटमात्र अघि त्यहाँ पुगेका थियौँ ।
त्यसैले नेपालका उदीयमान व्यावसायी चन्द्रप्रसाद ढकालले अहिले हरेक गोष्ठी, बैठक हुन् या मिडियासँगको कुराकानीमा भन्ने गर्छन्, ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालका वित्तीय संस्थाका लागि जारी गर्ने या निर्माण गर्ने नीतिलाई सबैभन्दा पहिला कार्यान्वयनमा ल्याउने हामी नै हौँ ।’
अहिले उनी आइएमई ग्रुप, ग्लोबल आइएमई बैंक र चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेडको अध्यक्ष छन् । उनी अध्यक्ष रहेका अरु सामाजिक सङ्घसंस्था कैयौँ छन् । नेपालमा बैंक तथा वित्तीय सेवालगायत जलविद्युतका क्षेत्रमा पनि उनको ओझपूर्ण उपस्थिति भइसकेको छ । नेपालको व्यवसायमा बहुआयामिक क्षेत्र समेट्दै अघि बढेका उनी सबैलाई परिश्रम नै गर्न सिकाउँछन् । भन्छन्, ‘संसारका अरु भूगोलका तुलनामा हाम्रो माटो धेरै मलिलो छ । यहाँ जे रोपे पनि सुन फल्छ, तर यसले मेहनतको अपेक्षा गर्छ । म त भन्छु, हामी माटो रोपेर सुन फलाउन सक्छौँ, उद्यम गर्न अन्त कतै भौँतारिनु पर्दैन ।’
अनौपचारिक कुराकानीकै क्रममा हामीले जिज्ञासा राख्यौँ– नेपालका सबै उद्यमी, व्यवसायी तपाईँजस्तै सफल छन् र ? उनले लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको प्रश्नोत्तर कविताबाट दुई लाइन सुनाए– ‘के हो ठूलो जगतमा पसिना विवेक, उद्देश्य के लिनु उडी छुनु चन्द्र एक’ यो कविता त तपाईँले पढ्नु भएकै होला । तर धेरैले अर्ति उपदेश दिँदा यो तल्लो हरफ मात्र भन्छन् । सबैले चन्द्रमा नै छुने उद्देश्य लिनु भन्छन् । तर पनि त्यसको माथिल्लो हरफ प्रायःले उच्चारण नै गर्दैनन् । चन्द्रमा छुन सिकाउने अथवा सम्भव बनाउने चाहिँ माथिल्लो लाइन पसिना र विवेक हो । पसिना, परिश्रम या मेहनत हो, विवेक बुद्धि या ज्ञान हो । पसिना र विवेकबिना नै चन्द्रमा छुन खोजेर सम्भव छैन, सकिँदैन । हाम्रो पसिना र मेहेनतको मूल्याङ्कन गर्नुभयो भने तपाईँको प्रश्नको उत्तर आफै पाउनुहुन्छ ।’ अनि ढकालले थपे, ‘हो, मानिसलाई कतिपय अवस्थामा नसोचिएको सफलता पनि हात लाग्छ अथवा केही नसोचिएका कुराहरु पनि हुन सक्छन् । तर पनि ती सबै नराम्रा पनि त हुँदैनन् ! जे हुन्छ राम्रै हुन्छ ।’
‘आइएमई’ सँग सायदै कोही नेपाली अपरिचित होलान् । यो एउटा कम्पनीमात्र नभएर नेपालीको जीवनशैलीसँग जोडिन पुगेको एउटा पक्ष पनि हो ।
ढकाल दाजुभाई कुनै व्यवसाय गरेर एक व्यक्ति सफल हुने भन्दा पनि उसले राष्ट्रलाई के दियो भन्ने महत्वपूर्ण हुने विश्वास राख्छन् । उनीहरुको सोच र अभियानबाट देशको अर्थतन्त्रको प्रमुख स्रोत बनेको रेमिट्यान्स (विप्रेषण)लाई पारदर्शी र व्यवस्थितरूपमा स्वदेश भित्र्याउन आजसम्म नै सम्भव भएको छ । त्यसैले त अहिले प्रायः हरेक नेपाली घरपरिवारसँग जोडिएको रेमिट्यान्ससँग उनीहरुको कडा परिश्रमको टेको लागेको छ ।
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकका सहायक तहका कर्मचारी रहेका ढकाल त्यसको करीब साढे दुई दशकपछि देशकै सबैभन्दा ठूलो बंैकको अध्यक्ष बन्न सफल भए । मङ्सिर २० गते संयुक्त कारोवार शुभारम्भका लागि ग्लोबल आइएमई बैंकको कर्पाेरेट कार्यालय कमलादीमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडा र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा। चिरञ्जीवी नेपालले सो कारोवार शुभारम्भको उद्घाटन गरेका थिए । त्यस कार्यक्रममा उनलाई मन्त्री एवं उपस्थित सबैले सबैभन्दा ठूलो बैंकको अध्यक्ष भएकोमा बधाई दिँदै देशकै ठूलो बैंक भएकाले सबैको आँखा लाग्ने भन्दै चुनौती थपिएको पनि सुझाएका थिए ।
सायद यही मायाले होला ढकाल परिवारले अमलाचौरको पृथ्वी हिरण्य माध्यमिक विद्यालयमा रु। छ करोडभन्दा बढी रकम खर्च गरेर भौतिक विकास गरेको छ । सो भवनको गत वैशाखमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गरिन् । उनका स्व। पिता हिरण्यप्रसाद ढकालको स्मृतिमा उक्त विद्यालयको नामाकरण गरिएको छ र उक्त भवनको नाम हिरण्य स्मृति भवन राखिएको छ ।